Izindaba - Indima eyadlalwa ukukhanya komthwebuli esithombeni
1. Nikeza ukukhanya okwanele
Ukusebenza kwekhamera kufanele kunikeze ukukhanya okwanele ngaphambi kokuthi isebenze ngokujwayelekile futhi ishuthe izithombe eziyiqiniso nezicacile. Umsebenzi wokuqala wokukhanya ukunikeza usizo lapho ukukhanya kunganele.
2. Nikeza ibhalansi yokushisa yombala ohlobene
Umsebenzi wokukhanya lapha uwukunikeza ibhalansi yokushisa yombala ezinzile ukuze kuqinisekiswe ukubuyiselwa kwangempela kombala wento esesithombeni. Phakathi kwazo, kukhona ezinye izinto ezisizayo kulokhu, njengephepha elithambile elikhanyayo, iphepha lokushisa lombala, njll.
3. Lawula isilinganiso sokukhanya
Ikhamera ngokwayo inomkhawulo wesilinganiso sokukhanya. Okubizwa ngokuthi isilinganiso sokukhanya isilinganiso sokukhanya okuqine kakhulu kokukhanya okubuthakathaka. Uma iphezulu kakhulu, izokhiqiza amabala akhanyayo, futhi uma iphansi kakhulu, izobangela umsila omnyama.
4. Ukusebenza kwendawo, untathu-ntathu, kanye nokuthungwa
I-TV noma ikhompuyutha iyimidiya enezinhlangothi ezimbili enobude nokukhanya kuphela, kodwa ayinakho ukujula. Umuzwa wokujula udinga ukuboniswa ngoshintsho lwendawo yekhamera, idizayini yangemuva, nokukhanya. Ukusetshenziswa kahle kokukhanya kungabonisa ukujula kahle.
5. Gqamisa umzimba oyinhloko
Ukusetshenziswa kahle kokukhanya kungagqamisa kangcono isihloko ngesilinganiso sokukhanya esinengqondo.
6. Yakha indawo ezungezile
Ukusebenzisa ukukhanya kungenye yezindlela zokubonisa ubuciko ezithombeni. Ukukhanyisa okunengqondo kungenziwa futhi kulingise indawo ethile, okusiza kakhulu ekunikezeni umkhathi.
Okungenhla yindima edlalwa ukukhanya emsebenzini wokuthatha izithombe. Ukusetshenziswa kahle kokukhanya kungengeza amaphuzu ezingeni lobuciko ekuthwebuleni izithombe.
Isikhathi sokuthumela: Dec-06-2021 EMUVA
Light Panel Suppliers, Abahlinzeki beLamp Dimmable, I-Led Light Yendandatho Yezithombe, Iphaneli ye-Rgb Led, Gcwalisa Ukukhanya, Iphaneli Led Rectangular,